>SUU 66, Ni July | MoeMaKa Burmese News & Media
တင်အေး (၈၈ မျိုးဆက်၊ ဗကသ) – ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး ပကတိအခြေအနေ နဲ့ တတိယနည်းပရိယာယ်လမ်းစဉ် (၂ ) နိဂုံး
ထိုက်နန္ဒာဝင်း ● လူကုန်ကူးခံရမှုမှ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို အွန်လိုင်းတွင် ရှာတွေ့ကြခြင်း
မောင်လူပေ - ပြီးတော့မှာ လား trade war
ဇင်လင်း ● နိုင်ငံရေး သဘောကွဲလွဲမှုများကို လက်နက်နည်းဖြင့် အဖြေရှာ၍ မရနိုင်
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - ရေးသားမထားသော ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်သောဖြစ်ရပ်များ
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● သွေးဆောင်ဖျားယောင်းလို့မရသော
သိင်္ဂါလှိုင် (ကဗျာမြေသား) - မီးကိုမှ ဖွင့်ဖတ်မိတဲ့မြို့
Ath - Cartoon
“ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ နောက်ဆုံးနေ့ မြင်ကွင်းများ ” စာအုပ်သစ်မိတ်ဆက်
ကျော်ဟုန်း - ပြန်ပြောင်းရမယ့် ပြောင်းပြန်
အေးဝင်း (လမင်းတရာ) ● ကိုယ်တို့ခေတ်က စာပေဖြန့်ချိရေး
သန္တိသုခကျောင်းကို အာဏာပိုင်များ ချိတ်ပိတ်၊ သံဃာများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ထိန်းသိမ်း
>&quot;Khet Mar portrait&quot; by Burmese artist Maung Nyo Win
>Burmese Regime cannot control US$ exchange rate with Kyats
ကာတွန်း ATH - ဖေ့စ် ၀ုတ် ...
>Questions for Suu - RFA Programs
>Karen New Year in Rangoon
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး - ပြိတ္တာတို့မျက်ရည် ဆုပေးပွဲကြီး
Join 89,108 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month January 2019 (94) December 2018 (147) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
>SUU 66, Ni July
မေတ္တာခြုံ … လုံပါစေ
ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၁
စစ်လက်ကျန် ဘတ်စ်ကားအိုကြီးဟာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာ တအိ အိပြေးလျက်။ ခြံအမှတ် (၅၄) ရှေ့  အရောက်မှာ ကားပေါ်ကလူတွေရဲ့အာရုံက ဒေါ်စု ခြံရှေ့ရှိ လူပရိသတ်ဆီ စုပြုံရောက်သွားကြတယ်။
တယောက်တပေါက် ပြောသံတွေ ကားပေါ်မှာ ထွက်လာတယ်။ လူ တော်တော်များများက ရှေ့ မှာရပ်မယ့် ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံမှတ်တိုင်မှာဆင်းဖို့ တသိုက်သိုက်နဲ့ ပြင်နေကြပြီ ။
ကားစပယ်ယာကလေးရဲ့ ခပ်သွက်သွက် အပြောလေးကြောင့် တကားလုံးပြုံး ကြတယ်။ စပယ်ယာကလေး မျက်နှာ ကလဲ ရှစ်ခေါက်ချိုးမဟုတ်။ ပြုံးလို့။ ဟုတ်ပါရဲ့။ ဒေါ်စုခြံအလွန် ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံ မှတ်တိုင်မရောက်ခင် ကားက ရပ်ပေးလိုက်တော့ … တကားလုံး သွန်ချလိုက်သလို။ ကားပေါ်မှာ ဒရိုင်ဘာနဲ့ စပယ်ယာဘဲ ကျန်တယ်။ ကား ပေါ်က လူတွေဟာ နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုခြံဘက်ဆီ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းလို့။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်း ပြုလုပ်နေကြ ဒေါ်စုခြံရှေ့ စကားဝိုင်းလေးဆီသို့။ အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဒေါ်စုကို ချစ်ခင်လေးစားစိတ်တွေ အပြည့်။ မေတ္တာဓာတ်တွေ အပြည့်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ အပြည့်။
ခြံရှေ့သံတံခါးကြီးကတော့ ပိတ်ထားတုန်း။ ကားပေါ်က ဆင်းလာသူတွေကလဲ ခြံရှေ့ က လူအုပ်ထဲ စီးဝင်ရောယှက်။ အချင်းချင်းလဲ သိသိ မသိသိ နှုတ်ဆက်ကြ ပြောကြ ဆိုကြ ရီမော ဖလှယ်ကြ။
ဟော …. ဟိုမှာ ဒေါ်စုရဲ့သားငယ်လေးပါလား။
ကရင်ပုဆိုးအနီကလေးနဲ့ ဘေးမှာ သူ့သူငယ်ချင်း ထင်တယ်။ သူနဲ့ရွယ်တူ နိုင်ငံခြားသားရုပ် လူငယ်ကလေး တယောက်နဲ့ အတူတူ။ လူအုပ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ ထိုင်ရင်း … သူ့အမေရဲ့ လူထုစကားဝိုင်း မြင်ကွင်းကို ကြည့်နေ တယ်။ ငယ်ငယ်က အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေ ပြောခဲ့တဲ့ သူ့ မေမေဟာ … ခုတော့ သူမ ရဲ့ လူထုကို ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေအကြောင်း ပြောရင်း သူမ ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည် ကို အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ မမောနိုင် မပမ်းနိုင် ကြိုးပမ်း နေရတဲ့အခြေအနေကို (၁၄) နှစ်အရွယ် သားငယ်လေး၊ ဘယ်လို နားလည်လက်ခံ ထားရရှာပါလိမ့်။
သိပ်မကြာခင်မှာ … ခြံဝင်းသံတခါးကြီးအပေါ်မှာ … ဒေါ်စု၊ ဦးကြည်မောင်၊ ဦးတင်ဦးတို့ (၃) ယောက် ပေါ်လာတယ်။ သူမရဲ့ လူထုပရိသတ်ကြီးဟာ လက်ခုပ်သံ တဖြောင်းဖြောင်းတီးရင်း … သူမတို့အဖွဲ့ကို ကြိုဆိုကြတယ်။ တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် မေတ္တာ တုံ့ပြန်နေကြလို့၊ စင်ပေါ်ကလူတွေကော၊ စင်အောက်က လူထုပရိသတ် ပါ ပြုံးရွှင်တဲ့ မျက်နှာ ကိုယ်စီနဲ့ ပါ။
လူထုက သိချင်လို့မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်စုတို့အဖွဲ့က ဖြေလို့။ လူထုက လဲ အပြန်အလှန် မေးကြ ဖြေကြ။ တိုင်းပြည်ကို စနစ်ဆိုးအောက်က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်း စဉ်းစား အဖြေရှာကြလို့။ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းတွေပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ခြံဝင်းသံတိုင်တွေ နောက်ကနေ … သံတိုင် တွေကိုကိုင်ရင်း ခြံပြင်ကလူထုကို ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေသူက မိုက်ကယ်အဲရစ်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် အခေါ် … မိခိလ။
သူ့ချစ်ဇနီးနဲ့ သူမရဲ့လူထု တသားတည်းဖြစ်နေတာကို … ကြည်ကြည်နူးနူး ငေးမောလို့။ သူ့အတွေးတွေထဲမှာ …. ”သူချစ်တဲ့ … စုကို သူ မပိုင်တော့ပါလား” လို့ များ တွေးနေလေမလား။
ခဏနေတော့ ရှေ့ဆုံး လူအုပ်ထဲမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား။ ဘာတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်။ ဒေါ်စုကလဲ စကားပြောရင်း ခဏငုံ့ကြည့်တယ်။ ဦးကြည်မောင်၊ ဦးတင်ဦးတို့ကလဲ … ပြုံးပြီး ငုံ့ကြည့်လို့။ စိတ်ပူစရာတော့ …. မဟုတ်လောက်။
နောက်တော့မှ ဒေါ်စု ခြံစည်းရိုး သံတိုင်တွေမှာရှိတဲ့ သံတိုင်ကောက်ကောက်ကြီးတွေ ကြားထဲမှာ … သံဆူးချွန် အဖြောင့် တိုတိုကလေးတခုစီ ရှိတယ်။ ဒေါ်စုက စကားပြောရင်း သံတိုင်ကောက်ကောက်ကြီးတွေပေါ်ကို လက်တင်ပြီး ပြောတာကိုး။
အဲဒီမှာ တယောက်က … ဒေါ်စုလက်ကို သံဆူးချွန် အတိုလေးတွေနဲ့စူးမှာ စိုးရိမ်သွားသကိုး။ သူ့မှာပါလာတဲ့ … ရေးနိုး ဘောပင်အဖုံးကလေးကို ချွတ်ပြီး သံဆူး ငုတ်တိုလေးပေါ်ကို သွားစွပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဘဲ တယောက်ပြီး တယောက်၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဘောပင် အဖုံးကလေးတွေ ချွတ်ချွတ်ပြီး သံဆူး ငုတ်တိုကလေးတွေမှာ သွား .. သွား စွပ်လိုက်ကြတာ… ခြံစည်းရိုးက သံဆူးငုတ်တိုလေးတွေ အကုန် ဘော ပင်အဖုံး ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်ပါရောလား …။
မေတ္တာဆိုတာ … ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ သဘောပေါ့နော်။ ပြည်သူတွေက … သူ တို့ ချစ်တဲ့ ဒေါ်စုကို သံဆူးငုတ်တိုကလေးတွေနဲ့တောင် ဆူးမိခြစ်မိမှာ မလိုလားကြ ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅) နှစ်လောက်က မြင်ကွင်းကလေးကို ဒီနေ့အထိ မေ့မရ။ ပြည် သူ့မေတ္တာ လွှမ်းခြုံခံထားရတဲ့ … ဒေါ်စု … ဘေးအန္တရာယ် အသွယ်သွယ်က အမြဲ လွတ်မြောက်ပါစေ …. ။ ။
ပန်းချီ – နီဇူလိုင်